नाटकघरमा भक्ति संगीत- कला - कान्तिपुर समाचार
नाटकघरमा भक्ति संगीत
काठमाडौँ — भजन–कीर्तन भन्नासाथ मठ–मन्दिरमा गाइने गीत बुझिन्छ । संगीतको यो विधा शनिबार भने मन्दिर होइन नाटकघरमा सुन्न पाइयो । हुन त गायकले नाटकघरलाई पनि मन्दिरकै संज्ञा दिएका थिए ।
सर्वनाम थिएटरले आयोजना गरेको ‘आराधना–२’ भक्ति संगीत कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै गायक मनीष सापकोटा र वाद्यवादक टोली । तस्बिर : बिजु महर्जन
तर, आफूलाई मन्दिरबाट बाहिर निकालेकोमा मनीष सापकोटाले सर्वनाम थिएटरलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरे ।
सर्वनामले हालै सुरु गरेको ‘आराधना’ संगीत शृंखलाको दोस्रो भागमा मनीष प्रस्तुत भएका हुन् । उनले एक दर्जन भक्ति संगीत प्रस्तुत गरे । वाद्यवादक र कोरससहितको उनको समूहले देवीदेउताको पुकार गर्दै सुरुमा सेन्टिमेन्टल र त्यसपछि तीव्र वेगका गीत सुनाएको थियो । ‘हामी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह गर्न चाहन्छौं,’ गायकले स्टेजबाटै भने, ‘धर्मले मानिसमा विभाजन ल्याउँछ । तर, अध्यात्मले चाहिँ मनहरूलाई जोड्छ ।’ उनका अनुसार भक्ति संगीत मूलत: संगीतको आध्यात्मिक विधा हो ।
उनले गणेशको स्तुतिमार्फत कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि साई भजन सुनाए । शिव भजन प्रस्तुत गरिरहँदा झ्याप्प बत्ती गयो । माइक र विद्युत्तीय वाद्यवादन बन्द भए पनि गायन रोकिएन । बरु, दर्शक–श्रोतासमेत थप्पडी बजाउँदै ‘ओम नम: शिवाय, शिवाय नम: ओम...’ गाउन थाले । ‘अघि थिएटरलाई मन्दिर भनेको थिएँ नि,’ मनीष बोले, ‘अहिले मन्दिरमै गाएको आभाष भइरहेछ ।’
संगीतको व्याकरणभन्दा भावमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले आफू सिक्ने क्रममै रहेको पनि अवगत गराए । भाव प्रकट गर्न सक्नु भक्ति संगीतमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ । उनले ‘गोपाल, गोवद्र्धन...’ बोलको कृष्ण भजन गाइसकेपछि भने, ‘एउटै शब्द धेरै पटक खेलाउँदा शब्दलाई फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । एउटै शब्द दोहोर्‍याइरहँदा हामी स्रोतालाई आ–आफ्ना प्रिय देवताको अलग–अलग नाम उच्चारण गर्न लगाउँछौं ।’
कार्यक्रममा मनीषले हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको ‘आपद सारा हट्नेछ...’ बोलको साई भजनसँगै शिव र कृष्णका अनेक कीर्तन सुनाएर माहोल रोमाञ्चक बनाएका थिए । उनलाई तबलामा लक्ष्मी डंगोल, ढोलकमा सुधीर चौधरी, मादलमा सुनील अर्याल, बाँसुरीमा डा. नीरञ्जन भण्डारी, गितारमा जीके, अक्टोप्याडमा तेजकुमार श्रेष्ठ र किबोर्डमा ब्रोनो तामाङले साथ दिएका थिए । सीता सुवेदी, मनुका कुँवर, तारा लिम्बू र मीना नेपाली कोरसमा थिए ।
आयोजक सर्वनाम थिएटरका अशेष मल्लले यो शृंखलालाई सयौं भागसम्म पुर्‍याउन चाहेको बताए । थिएटरलाई नाटकमा मात्र सीमित नराखेर कलाका विविध विधा एउटै छानामुनि प्रस्तुत गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो । थिएटर भनेको आध्यात्मिक चिन्तनको थलो भएकाले यसमा संगीत विधा जोड्नु आवश्यक लागेको बताए ।
अशेषले भक्ति संगीत नै किन रोजियो भन्नेबारे पनि उजागर गर्न चाहे । ‘यो विधा कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘खासमा यो आध्यात्मिक विधा हो । सामाजिक विकृति बढिरहेको बेला युवालाई उत्प्रेरणा जगाउन सक्ने विधाको प्रवद्र्धन हुनुपर्छ ।’ समारोहमा संगीतकार दीपक जंगम, गायक बुलु मुकारुङ, किरण प्रधान, गीतकार रमण घिमिरेलगायतले गायक तथा वाद्यवादकलाई शुभकामना दिएका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:१०
ज्योतिषीसँगको फरक प्रेम
काठमाडौँ — एउटा ज्योतिषी जो देशमै पनि नामी छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड थाप्ने क्रममा विदेश गएपछि सोही देशमा एमबीबीएस पढदै गरेकी युवतीसँग भेट हुन्छ । भेट छोटो भए पनि माया गाढा बस्छ । तर ज्योतिषी देश फर्किनुपर्छ, युवतीले परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने कारण केही महिना दुईबीच भेट हुँदैन ।
फिल्म शुभ लभ छाया‌ंकन क्रममा कलाकारहरु बाँयाबाट सराेज खनाल, क्रिष्टिन पाैडेल, हरिहर अधिकारी । तस्बिर : कान्तिपुर
फिल्म ‘शुभ लभ’ को शुक्रबारदेखि छायांकन आरम्भ भएको छ । फिल्ममा ज्योतिषीको भूमिकामा हरिहर अधिकारी र उनकी प्रेमिकाको भूमिकामा क्रिस्टिन पौडेलले अभिनय गरिरहेका छन्। ज्योतिषी अधिकारी र २०१७ की मिस टिन पौडेल दुवैको ‘शुभ लभ’ डेब्यु फिल्म हुनेछ ।
शनिबार छायांकनको दोस्रो दिनमा भने हरिहर र क्रिस्टिन दुवैबीच भेट भइरहेको दृश्य चलिरहेको छ । निर्देशक सन्तोषबाबु लोहनी महाराजगन्जस्थित एक कार्यालयमा दुवैलाई खिचिरहेका छन् । क्रिस्टिन फिल्ममा मामाको भूमिकामा रहेका अभिनेता सरोज खनालको साथ लागेर हरिहरको कार्यालय आएकी छन् । तर यतिबेला दुईबीच कुनै प्रेमालाप चलिरहेको छैन ।
बरु कुनै गम्भीर समस्याबारे कुरा भइरहेको छ । ‘यही सिनबाटै फिल्मको कथा खुल्छ,’ निर्देशक लोहनी अहिले नै कथा खुलाउने मनस्थितिमा देखिएनन् । बरु अनौठो प्रेमकथामा आधारित रहेर फिल्म बनाउन लागेको बताए । भने, ‘केही जटिल लाग्ने कथामा कमर्सियल फ्लेभर दिन खोजेका छौं ।’
ज्योतिषी अधिकारीको कथामा आधारित रहेर यसअघि ‘ए मेरो हजुर २’ बनाइएको थियो । यसपटक पनि उनको कथामा अभिमन्यू निरवीले पटकथा तथा संवाद लेखेका हुन् । फिल्ममा मुख्य हिरोलाई ज्योतिषी बनाइनु र ज्योतिषीलाई नै डेब्यु गराउनु संयोग मात्रै रहेको निर्देशक लोहनीले बताए । दृश्य चलिरहँदा मनिटरमा प्रिभ्यु हेरेर सट ओके गरेपछि लोहनीले थपे, ‘नयाँ भएर पनि धेरै टेक लिनुपर्ने वा हामीले भन्न खोजेका कुराहरू नबुझ्ने खालको भएको छैन । अहिलेसम्म टेक्निकल कारणले पनि पाँच टेकभन्दा बढी लिनुपरेको छैन ।’
हिरो भन्नेबित्तिकै राजेश हमाल वा विराज भट्ट जस्ता सुगठित भीमकाय शरीर भएकाकै स्वरूप दिमागमा आउने अवस्थामा सानो काँटीका हरिहरलाई लिनुको उद्देश्यबारेमा प्रश्न गर्दा निर्देशक लोहनी भन्छन्, ‘नयाँ कथावस्तुमा नयाँ नै कलाकार लिएर काम गर्नुमा मलाई बढी सहजता लाग्यो । भीमकाय शरीरको हिरो छैन । राजेश हमाल मार्काका भयंकर एक्सनवाला जस्ता फिल्ममा हरिहर जस्ता सानो काँटीका हिरो लिएको भए समस्या आउँथ्यो होला । तर हाम्रो स्टोरीमा उहाँले जसरी चारित्रिक रूपमा पर्फमेन्स गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ राजेश हमाल नै लाग्नुहुन्छ । त्यस हिसाबले पनि हामी एकदमै सन्तुष्ट छौं ।’
पूर्व मिस टिन पौडेललाई यसअघि पनि केही फिल्ममा हिरोइन बन्न आएका प्रस्तावलाई उनले स्वीकार गरिरहेकी थिइनन् । ‘शुभ लभ’ को स्क्रिप्ट सुनेपछि भने यो प्रोजेक्ट गुमाउनु हुँदैन भन्ने लागेपछि डेब्युका लागि तयार भएकी रहिछन् । दोस्रो दिनको सुटिङ सकेर निस्कने क्रममा उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘दर्शक भएर फिल्म हेर्नुमा भन्दा यसरी काम गर्नु विल्कुलै फरक हुने रहेछ । तर पनि इन्जोय गरिरहेकी छु ।’ उनले को–स्टारका रूपमा हरिहर पनि कलाकारमा नयाँ नै भए पनि क्षमतावान् र सहयोगी पाएको बताइन् ।
नौ वर्षअघि नै रेखा थापा, मिथिला शर्मा, सुनील थापा आदि कलाकारलाई लिएर ‘नारी’ बनाए पनि स्वभाविक प्रदर्शन नपाएका लोहनीले यति बेला ‘शुभ लभ’ लाई कमब्याक भन्दा पनि डेब्यु नै भन्न बढी रुचाउँछन् । नौ वर्षको अन्तरालमा प्राविधिक रूपमा धेरै परिवर्तन पाएका लोहनी ‘शुभ लभ’ बाट कन्फिडेन्ट देखिन्छन् । ‘कथा, पटकथालाई फिल्मको मेरुदण्ड मानिन्छ । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै यही छ,’ यसबाहेक पनि उनले कथासँग पात्र चयन राम्रो भएको सुनाए ।
फिल्ममा हरिहर, सरोज र क्रिस्टिनसहित प्रदीप बाँस्तोला, रवीन्द्र झा, राजाराम पौड्याल, डा. सूर्या थापा लगायतको पनि अभिनय रहेको छ । धर्मराज सुवेदीको लगानी रहेको फिल्मको प्रस्तुतकर्ताका रूपमा प्रदीपकुमार उदय रहेका छन् । ४५ दिनको सेड्युअलमा काठमाडौंसहित लुम्बिनी, पोखरा, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प र एक गीतका लागि दुबई गएर खिचिने फिल्मलाई प्रदर्शन भने चैत १५ मा गरिने बताइएको छ ।
रामेश्वर कार्कीको छायांकन तथा अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको फिल्म अहिले चलिरहेको ट्रेन्डभन्दा अलि फरक किसिमको कथालाई व्यवसायिक हिसाबले पस्किने कोसिस गरिरहेको निर्माण पक्षको दाबी छ । निर्देशक लोहनी पनि ‘शुभ लभ’ आफ्नो कमब्याकका लागि शुभ हुने आशामा देखिए । उनले भने, ‘डेढ दुई वर्षदेखि कमब्याकको योजना बनाएर यसबीचमा ८/१० कथा सुने पनि चित्त बुझिरहेको थिएन । त्यही क्रममा हरिहरजीले ‘शुभलभ’ को स्टोरी सुनाएपछि मलाई अन्त कतै जान पनि मन लागेन । यसैमा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यसैमा वर्कआउटमा लागेका हौं ।’
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:०९
अब टुबोर्ग ओपन सेसन्स २
दसैंमा सराएँ नाच
फिल्ममा लोकगीत हाईहाई